सीएनसी मिलिंग मेशिन, ठाडो माचिंग सेन्टर, & र ax अक्ष, चीन आपूर्तिकर्ता
तिमि यहाँ छौ: घर1 / सीएनसी मिलिंग मेशिन, ठाडो मशीनिंग सेन्टर, & र ax अक्ष, चीन एस ...
CNC मिलिंग मशीन
धातु म्याच गर्नको लागि उच्च प्रेसिजन
यदि तपाईं प्लेन (तेर्सो प्लेन, ठाडो विमान), ग्रूव (किवे, टी-स्लट, डोभेटेल स्लट, आदि) प्रशोधन गर्न चाहानुहुन्छ भने दाँतका भागहरू विभाजन गर्नुहोस् (गियर, स्प्लिन शाफ्ट, सर्पिल सतह), भित्री प्वाल, घुमाइएको सबै प्रकारका। सतह, क्रान्ति को ठोस उत्पादन र कटाई प्रशोधन, हाम्रो CNC मिलिंग मेशिन तपाईंको आदर्श छनौट हुनेछ। सीएनसी मिलिंग मेशिन व्यापक रूपले मोटर वाहनको पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल उपकरण, मोटरसाइकल, उपकरण, हार्डवेयर, मोटर र अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ।
सीएनसी मिलिंग मेशिनको छनोट मुख्यतया वर्कपीस, साइज र प्रोसेसिंग मोडको लम्बाइमा निर्भर गर्दछ, सटीक प्रशोधनको लागि, साना र मध्यम आकारको ब्याच र प्राय: आवधिक रूपमा दोहोर्याइएको उत्पादन, सीएनसी मिलिंग मेशिनको प्रयोग एकदम उपयुक्त छ, यदि ठूला भागहरू , ठूलो मोल्ड प्रेसिजन प्रसंस्करण, गैन्ट्री प्रसंस्करण केन्द्र छनौट गर्नुपर्छ। स्वचालित उच्च डिग्री संग मिलिंग मशीन सामान्य मिलिंग मशीन प्रतिस्थापन, श्रमिकको श्रम कम, उत्पादकता बढाउने प्रवृत्ति अपरिहार्य छ। हाम्रो सीएनसी मिलिंग मशीन गुणवत्ता स्थिरता, नियन्त्रण गुणवत्ता बाट स्रोत, विनिर्देशहरूमा पूर्ण, सोधपुछ गर्नका लागि स्वागत छ।
प्रश्नहरू?हामीलाई कल गर्नुहोस् + -15 86-१-153१18444949 39, र हाम्रो एक प्रतिनिधिलाई कुरा गर्नुहोस्।तपाईले हाम्रो सम्पर्क फाराम पनि भर्न सक्नुहुन्छ।
बिक्री को लागी CNC मिलिंग मशीन:
सीएनसी माचिंग केन्द्र ११60०
टेबल szie: 1200 * 600mm
यात्रा: ११०० * *०० * mm०० मिमी
मुख्य मोटर: ११ किलोवाट
सीएनसी मसि। केन्द्र१२70०
टेबल szie: 1360 * 700mm
यात्रा: १२०० * *०० * mm०० मिमी
मुख्य मोटर: १k किलोवाट
सीएनसी मसि। केन्द्र१7070०
यात्रा: १00०० * *०० * mm०० मिमी
सीएनसी मसि। केन्द्र5050०
टेबल szie: 900 * 400mm
यात्रा: *०० * *०० * mm०० मिमी
मुख्य मोटर: .5..5kw
टेबल szie: 1000 * 500mm
सीएनसी मसि। केन्द्र5 855
टेबल szie: 1000 * 550mm
यात्रा: *०० * 5050० * 5050० मिमी
सीएनसी मसि। केन्द्र4040०
टेबल szie: १००० * mm 360० मिमी
यात्रा: *०० * * 360० * 5050० मिमी
मुख्य मोटर: 7.7kw
Cnc मिलिंग मशीन machine२०
टेबल szie: 600 * 200mm
यात्रा: *०० * २०० * mm०० मिमी
मुख्य मोटर: १.१ किलोवाट
Cnc मिलिंग मशीन machine 736
टेबल szie: १२ 12० * mm 360० मिमी
यात्रा: * ०० * *०० * mm०० मिमी
सीएनसी मिलिंग मेशीनको भिडियो
उच्च कठोरता, उच्च स्थिरता, उच्च गति
(हामीलाई तपाईंको आवश्यकताहरू बताउनुहोस्, हामी तपाईंलाई १२ घण्टा भित्र उद्धृत गर्नेछौं)
सीएनसी मिलिंग मेशिन के हो?
सीएनसी मिलिंग मेशीन अत्यधिक स्वचालित मिलिंग उपकरण हो, workpiece ध्यान नदिई प्रशोधन गर्न सक्छन्। Workpiece मिलिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, पुन: नामाकरण, ट्यापिंग र अन्य प्रक्रियाहरू मात्र एक क्ल्याम्पिंग पछि हुन सक्छ। प्रसंस्करण प्रक्रियाको विकासको लागि आकार, आकार, सटीक र सतह मोटाई र अन्य प्राविधिक आवश्यकताहरूको अनुसार प्रोसेसिंग प्यारामिटरहरू छनौट गर्नुहोस्। म्यानुअल प्रोग्रामिंग वा सीएएम सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर स्वचालित प्रोग्रामिंगको माध्यमबाट, प्रोग्राम गरिएको प्रोसेसिंग प्रोग्राम नियन्त्रकको इनपुट हो। म्यानुअल वृद्धिशील आन्दोलन workpiece माथि सार्न र कटर, निरन्तर आन्दोलन वा मेसिन उपकरण सार्न म्यानुअल व्हील पंक्तिबद्ध गर्न अनुकूल छ। कार्यक्रमको सुरूमा सुरूवात विन्दु सेट गर्नुहोस् र उपकरण बेन्चमार्क सेट गर्नुहोस्। कन्ट्रोलर प्रोग्राम प्रोसेसिंग पछि, कन्ट्रोलरले सर्वो उपकरणमा निर्देशनहरू प्रसारित गर्दछ। सर्वो उपकरणले सर्वो मोटरमा नियन्त्रण संकेत पठाउँदछ। स्पिन्डल मोटरले उपकरणलाई घुमाउँदछ, र एक्स, वाई र जेड दिशामा सर्वो मोटरले उपकरणको सापेक्ष आन्दोलन र वर्कपीसलाई निश्चित ट्र्याक अनुसार नियन्त्रण गर्दछ, ताकि वर्कपीसको काट्ने महसुस गर्न।
मल्टि-सतह मशीनिंगले चौथो अक्ष बढाउन सक्दछ, गतिशील प्लेटफर्ममा विद्युतीय विभाजक टाउकोको-360०-डिग्री घुमा add्ग थप्नको लागि, ताकि यसले स्वचालित विभाजित बेभल होल, बेभल मिलिंग र अन्य जटिल स्थान सतह उच्च-सटीक मशीनिंग गर्न सक्छ। सटीक माध्यमिक क्ल्याम्पि ofको घाटा बिना।
सीएनसी मिलिंग मेशिन सटीक, सुविधाजनक र कुशल, यो सटीक धातु मिलिंगको लागि उपकरणको अत्यावश्यक टुक्रा हो।
सीएनसी मिलिंग मेशिनका प्रकारहरू
१, धुरी अक्ष स्थिति स्थिति अनुसार ठाडो सीएनसी मिलिंग मेशिन, तेर्सो सीएनसी मिलिंग मशीन, गैन्ट्री सीएनसी मिलिंग मेशिन, ठाडो र तेर्सो सीएनसी मिलिंग मेशिनमा विभाजित छ।
२, प्रसंस्करण कार्यको अनुसार साधारण सीएनसी मिलिंग मेशिन, सीएनसी गियर मिलिंग मेशिन, सीएनसी कपि m मिलिंग मेशीनमा विभाजन गरिएको छ।
,, नियन्त्रण अक्षको संख्या अनुसार दुई-अक्ष CNC मिलिंग मेशिन, तीन-अक्ष CNC मिलिंग मेशिन, दुई-अक्ष CNC मिलिंग मेशिन, बहु-अक्ष CNC मिलिंग मेशिनमा विभाजित छ।
,, सर्वो प्रणाली अनुसार कन्ट्रोल मोडलाई ओपन-लूप सर्वो सिस्टम सीएनसी मिलिंग मेशिनमा विभाजित गरिएको छ, बन्द-लूप सर्वो सिस्टम कन्ट्रोल मिलि machine मेशिन, अर्ध-बन्द-लूप सर्वो सिस्टम सीएनसी मिलिंग मेशिन
सीएनसी मिलिंग मेशीनको अनुप्रयोग
खनन मेसिनरी, मोटर वाहन, एयरोस्पेस, प्रिन्टि,, प्याकेजि,, सैन्य उद्योग, मोल्ड, शिपिंग, टेक्सटाईल मेसिनरी, कृषि मेशीनरी, धातुकर्म खानी, मेशिन उपकरण निर्माण र अन्य उद्योगहरूका कुञ्जी उपकरणहरूमा लागू।
सीएनसी मिलिंग मेशिन संरचना, घटक
विश्वको पहिलो मशीनिंग सेन्टर १ 195 .8 मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा जन्म भएको थियो। संयुक्त राज्यको कम्पनीले एक उपकरण परिवर्तन गर्ने उपकरण जोडी CNC बोरिंग र मिलिंग मेशिनमा थप्यो, जुन पहिलो मशीनिंग केन्द्रको आगमनलाई चिह्नित गर्दछ। विगत years० बर्षमा त्यहाँ धेरै प्रकारका मशीनिंग केन्द्रहरू रहेका छन्। यद्यपि तिनीहरूको आकृति र संरचनाहरू फरक छन्, तिनीहरू सामान्यत: निम्न भागहरू मिलेर बनेका छन्।
१. आधारभूत कम्पोनेन्टहरू
यो ओछ्यान, स्तम्भ र worktable बाट बनेको छ, जुन मशीनिंग केन्द्र संरचना को आधारभूत भाग हो। यी ठूला भागहरूमा फलाम कास्टि and र वेल्डेड इस्पात संरचनात्मक भागहरू सामेल छन्। तिनीहरूले मेशिन केन्द्रको स्थिर लोड र मसिनको क्रममा काट्ने भार बोक्नु पर्छ। तसर्थ, तिनीहरूसँग अत्यधिक उच्च कठोरता हुनुपर्दछ, र तिनीहरू पनि मेशिन सेन्टरमा सब भन्दा ठूलो द्रव्यमान र भोल्युमको साथ अंशहरू हुन्।
२ स्पिन्डल कम्पोनेन्टहरू
यो स्पिन्डल बक्स, स्पिन्डल मोटर, स्पिन्डल र स्पिन्डल बियरि .्ग बाट बनेको छ। स्पिन्डलको सुरू, रोक्नुहोस्, र घुमाउने गति संख्यात्मक नियन्त्रण प्रणाली द्वारा नियन्त्रण गरिन्छ, र काट्ने स्पिन्डलमा स्थापित उपकरणद्वारा गरिन्छ। स्पिन्डल घटक मशीनिंगको पावर आउटपुट कम्पोनेन्ट र मशीनिंग सेन्टरको कुञ्जी घटक हो। यसको संरचनाले मशीनिंग सेन्टरको प्रदर्शनमा ठूलो प्रभाव पार्दछ।
Nu. संख्यात्मक नियन्त्रण प्रणाली
यो एक सीएनसी उपकरण, प्रोग्राम योग्य कन्ट्रोलर, सर्वो ड्राइव उपकरण र मोटर बाट बनेको छ। यो अनुक्रम नियन्त्रण कार्यन्वयन र मशीनिंग प्रक्रिया नियन्त्रण गर्न मसिining केन्द्रको केन्द्र हो।
Auto. स्वचालित उपकरण परिवर्तनकर्ता (एटीसी)
एक मशीनिंग केन्द्र र सामान्य मेसिन उपकरण बीच सबै भन्दा महत्वपूर्ण भिन्नता यो छ कि यो बहु प्रक्रियाहरूमा भागहरू प्रशोधन गर्न सक्ने क्षमता छ र स्वचालित उपकरण परिवर्तन उपकरणको एक सेट छ।
यो सीएनसी मिलिंग मेशिनको मुख्य अंश हो, जुन एक सीएनसी कन्ट्रोल सिस्टम, अपरेशन प्यानेल, ह्यान्ड पल्स जेनरेटर, ड्राइभर, सर्वो मोटर र पावर केबलले बनेको हो। सीएनसी मेशिन उपकरणको दिमागमा समान, सबै कार्यक्रम र कोडहरू सीएनसी प्रणालीमा सम्पादन गरियो।
F. पूर्ण रूपमा सुरक्षित सुरक्षा
यो भाग CNC मेशिन उपकरणको आर्मरको बराबर हो, जसले मेशिन उपकरणलाई बाह्य क्षतिबाट जोगाउन सक्छ, र मेशिन उपकरणको प्रभावबाट अपरेटर र कार्य वातावरणलाई पनि सुरक्षित गर्दछ। प्रणाली प्यानल र इलेक्ट्रिकल भाग यसमा स्थापना गर्न आवश्यक छ।
Ball बल पेंच
सर्वो मोटरको परिक्रमण कार्य गर्नको लागि सीधा ड्राइभ गर्न सक्दैन र सार्नको लागि स्पिन्डल। यो बल स्क्रूको माध्यमबाट हुन्छ, मोटरको परिक्रमण, टेबलको रैखिक आन्दोलनमा रूपान्तरण हुन्छ। बल स्क्रू र मोटर एक युग्मन द्वारा जोडिएको छ। स्क्रू र worktable पागल द्वारा जोडिएको छ।
Line रैखिक गाइड
जब worktable बेस मा सारिन्छ, यो मेशीन उपकरण संग घर्षण उत्पादन गर्न बाध्य छ। रेखीय गाइड रेल लुब्रिकेशन र घर्षण कम गर्न को भूमिका खेल्छ। भित्र बल वा रोलर संरचना छ। यसले तालिका चालको सटीकता र गति सुनिश्चित गर्न सक्दछ।
L लुब्रिकेशन प्रणाली
इलेक्ट्रोनिक तेल पम्पले मेसिन उपकरणको बियरिंग स्क्रू लुब्रिकेट गर्न मसला उपकरणको लुब्रिकेटिंग बिन्दुमा लुब्रिकेटिंग तेल प्रदान गर्दछ, ताकि मेशिन उपकरणको विश्वसनीयता र सेवा जीवन सुधार गर्न सक्दछ। लुब्रिकेशन प्रणाली एक स्वत: प्रणाली हो जुन संख्यात्मक नियन्त्रण प्रणालीसँग जोडिएको छ र संख्यात्मक नियन्त्रण प्रणाली द्वारा नियन्त्रित छ। समय अन्तराल र स्नेहन को मात्रा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
कस्तो प्रकारको वर्कपीस सीएनसी मिलिंग मेशिनको साथ प्रशोधनको लागि उपयुक्त छ?
सीएनसी मशीनिंग सेन्टरसँग उच्च स्वचालन, उच्च शक्ति, उच्च सटीक, उच्च वेग र उच्च विश्वसनीयताका फाइदाहरू छन्, तर यी सुविधाहरू केहि शर्तहरूमा आधारित छन्। एक मेशिन केन्द्रले उचित सर्तहरूमा मात्र उत्तम बेनिफिटहरू खेल्न सक्छ। निम्नलिखित सुविधाहरू मशीनिंग केन्द्रहरूका लागि सबैभन्दा उपयुक्त छन्।
१. पार्ट्स उत्पादन र आवधिकमा बारम्बार राखिन्छ
केहि बजारको बजार माग चक्रीय र मौसमी हो। यदि एक विशेष उत्पादन लाइन प्रयोग गरीन्छ, लाभ घाटा लायक छैन। साधारण उपकरणहरूको प्रशोधन दक्षता धेरै कम छ, र गुणवत्ता स्थिर छैन। मशिनिंग सेन्टरको पहिलो ब्याच (भागहरू) सफलतापूर्वक काटिए पछि, कार्यक्रम र सान्दर्भिक जानकारी कायम राख्न सकिन्छ, र अर्को उत्पादन प्रजनन उत्पादन सुरु गर्न सक्दछ जबसम्म कम तयारी समय हुन्छ।
२. महँगो उच्च सटीक भागहरू
केही भागहरूलाई थोरै चाहिन्छ, तर ती महँगो छन्। तिनीहरूलाई भत्काउन अनुमति छैन। तिनीहरूलाई उच्च परिशुद्धता र छोटो निर्माण अवधि आवश्यक पर्दछ। यदि परम्परागत मेशिन उपकरण प्रक्रिया गर्नको लागि प्रयोग गरिएको छ भने, यसलाई काम समन्वय गर्न धेरै मेशिन उपकरणहरू आवश्यक पर्दछ, र यो मानव कारकहरूद्वारा स्क्र्याप उत्पादन गर्नका लागि प्रभाव पार्न सजिलो छ। यदि मशिनिंग सेन्टर प्रक्रियाको लागि प्रयोग गरिएको छ भने, उत्पादन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कार्यक्रमद्वारा नियन्त्रण गरिन्छ, जसले प्रक्रिया प्रवाहमा हस्तक्षेप कारकहरूलाई बेवास्ता गर्दछ, र उच्च उत्पादन क्षमता र गुणस्तर मात्रा स्थिर छ।
Multi. बहु विविधता र सानो-ब्याच भागहरू
मशीनिंग सेन्टर उत्पादन को लचिलोपन मात्र भाग प्रसंस्करण को विशेष आवश्यकताहरु को द्रुत प्रतिक्रिया मा प्रतिबिम्बित छैन तर द्रुत जन उत्पादन प्राप्त र चाँडै बजार कब्जा गर्न सक्छन्।
Complex. जटिल संरचना र बहु-प्रक्रिया र बहु-स्टेशन प्रसंस्करणको साथ भागहरू
केहि भागहरूमा जटिल संरचना हुन्छ र साधारण मेसिन उपकरणहरूमा प्रक्रिया गर्न महँगो प्रक्रिया उपकरणको आवश्यक पर्दछ। सीएनसी मिलिंग मेशिनको प्रयोगले धेरै पटक उपकरण र फिक्स्चरहरू पनि बदल्नु पर्छ। मसिनिंग केन्द्र प्रयोग गरेर, यो एकै चोटि ड्रिलिंग, मिलिंग, बोरिंग, ट्यापिंग, ग्रुइoving र अन्य बहु-प्रक्रिया प्रकृया पूरा गर्न सम्भव छ।
Parts. भागहरू मापन गर्न गाह्रो
मेशिन सेन्टरले यस प्रकारका पार्ट्स मेशिनमा बढी फाइदाहरू छन्
G कोड र M कोड के हो?
एम कोडले सीएनसी मेशिन उपकरणहरूमा सहायक फंक्शन खेल्छ। केहि स्विच अपरेसनहरू सहयोगी प्रकार्यहरू प्रयोग गरेर सेट गर्न सकिन्छ, जस्तै M3: स्पिन्डल अगाडि रोटेशन, M4: स्पिन्डल रिभर्स रोटेशन, आदि।
जी कोड, कार्य तैयार गर्नुहोस्। जी कोड निर्देशन हो कि मेशिनले एक निश्चित प्रोसेसिंग मोड सेट अप गर्दछ। जस्तै रैखिक प्रक्षेप, गोलाकार प्रक्षेप, उपकरण क्षतिपूर्ति, समन्वय प्रणालीको स्थापना, र यस्तै।
एम निर्देशन र जी कोड एनसी मेशिन प्रोग्रामि ofको आधारभूत कार्यहरू हुन्। यी कोडहरूको साथ, आन्दोलनहरूको श्रृंखला महसुस गर्न सकिन्छ
जी कोड सिक्न कति समय लाग्छ?
जी-कोड (जसलाई rs-२44 पनि भनिन्छ) सबै भन्दा धेरै प्रयोग हुने संख्यात्मक नियन्त्रण कार्यक्रम हो।
कोड जान्न समय लाग्छ। सबै कोडहरू सुनाउन यो अनावश्यक छ। तपाईं सन्दर्भ पुस्तक क्वेरी गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईंले यो बिर्सनुभयो। तर कुञ्जी प्रत्येक अनुप्रयोग कोड मास्टर गर्नु हो। त्यहाँ धेरै नोटहरू र सुझावहरू छन्, जब तपाईं कोड बुझ्नुहुन्छ, तपाईं दृढतापूर्वक समात्नुहुनेछ र सम्झनुहुनेछ। याद राख्नुहोस्, कोड कण्ठ नगर्नुहोस्, यो मुख्य रूपमा अनुप्रयोगको कपालको बारेमा हो। धेरै कोडहरू नियमित छन्।
सिकारुहरुका बिभिन्न आधारहरु अनुसार, सीएनसी प्रोग्रामिंग को सीखने समय पनि फरक छ, जो सामान्यतया केहि महिना वा वर्षौं लाग्छ।
CNC मिलिंग मशीन मर्मत र मर्मत मर्मत
दैनिक निरीक्षण: मेशिन अपरेट गर्दा, निम्न घटनाहरू एक एक गरी जाँच गर्नुहोस्। यदि कुनै असामान्यता फेला पर्यो भने, तत्काल कारण पत्ता लगाउनुहोस् र त्यसपछि यसलाई हटाउनुहोस्। समस्याहरूको समाधान हुन नसक्ने अवस्थामा कृपया कृपया जतिसक्दो चाँडो हाम्रो कम्पनीलाई सूचित गर्नुहोस् जसले गर्दा असामान्यतालाई सकेसम्म चाँडो हटाउन सकिन्छ।
१.१ सुरु हुनुभन्दा पहिले
१) जाँच गर्नुहोस् कि विद्युत लाइन, सबै लाइनहरू, र पाइप जोड्ने बिग्रिएको छ वा कम सम्पर्कमा।
२) जाँच गर्नुहोस् कि चिकन तेल तेल पम्पको तेल को स्तरमा जोड्नै पर्दछ र वर्मा गियर बक्सको मानक तेल स्तर ठाडो उपकरण पत्रिकाको लागि सामान्य हो कि भनेर।
)) जाँच गर्नुहोस् कि तीन-पोइन्ट संयोजन सामान्य छ कि छैन।
)) तेल पाइप र तेल चुहावटको लागि संयुक्त जाँच गर्नुहोस्।
)) जाँच गर्नुहोस् कि तीन-पोइन्ट संयोजनको हावाको चाप सामान्य छ कि छैन र कि त दबाव स्विच आवश्यकता अनुसार समायोजित छ कि छैन।
)) जाँच गर्नुहोस् कि पानीको ट्या tank्कीको काटने तरल तहले काटि fluid फ्लुइड थप्न आवश्यक छ कि छैन।
)) सुरक्षा सुरक्षा उपकरण सामान्य र भरपर्दो छ कि छैन जाँच्नुहोस्, र खतरनाक क्षेत्रमा त्यहाँ कुनै कर्मचारी हुनु हुँदैन।
२.१ सुरु भएपछि
१) स्पिन्डलको तापमान वृद्धि सामान्य छ कि छैन जाँच गर्नुहोस् र त्यहाँ एक असामान्य आवाज छ कि छैन।
२) चिकनाई गर्ने तेल पम्पको निम्न चीजहरू सामान्य छन् कि छैनन् जाँच गर्नुहोस्।
a तेल आपूर्ति दबाव kkfg / सेमी २-kkfg / सेमी २ बीच छ
b चाहे लुब्रिकेटिंग तेलको उपभोग सामान्य छ (यदि उपभोग एकदम छिटो छ भने तेल रिसावका लागि तेल सर्किट जाँच गर्नुपर्नेछ)।
c तेल पम्पको कार्य गर्ने समय सामान्य छ कि छैन (-6-cc सीसी / समय / minutes मिनेट सिफारिस गरिएको छ)।
)) प्रोसेसिंग प्रोग्राम पूरा भएको छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्।
)) मशीनिंग उपकरण पूरा भएको छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्।
)) जाँच गर्नुहोस् कि स्थिरता परिवर्तन भएको छ कि छैन र यसको डाटा परिवर्तन भएको छ।
)) ट्रांसफार्मरले कुनै पनि समयमा उच्च तापक्रम उत्पादन गर्दछ कि गर्दैन त्यसमा ध्यान दिनुहोस्।
)) फिल्टरलाई पानीमा तीन-बिन्दुको संयोजनमा राख्नुहोस् ग्यास सुक्खा छ भनेर निश्चित गर्न।
)) स्पिन्डल उडाउने सामान्य छ कि छैन।
१.3 अपरेशन पछि
१) तालिकामा सबै चिपहरू, तीन-शाफ्ट शिल्ड, पानी ट्या tank्की, फिल्टर स्क्रिन र ठूलो ढाल हटाउनुहोस्।
२) स्पिन्डलको भित्री प्वाल सफा गर्नुपर्छ।
)) ह्यान्डलमा चिपिंगहरू कुनै पनि समयमा र हरेक hours घण्टामा हटाउनुपर्नेछ।
)) सन्तुलन कायम गर्न स्ट्रोकको बीचमा तीन-अक्षहरू सार्नुहोस्।
)) वर्कटेबलमा रस्ट-प्रूफ तेल लागू गरेपछि, चिप्स हटाउनुहोस्।
)) शिफ्टको अन्त्य पछि सम्पूर्ण मेसिनको उपस्थिति एक पटक सफा गरिनु पर्छ।
)) सुरक्षा ढोका ठीकसँग बन्द छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्।
)) पावर स्विच बन्द छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्।
)) पावर स्रोत स्विच बन्द छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्।
२ नियमित मर्मतसम्भार
२.१ मर्मत निर्देशन
१) मर्मत कार्यको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबै विद्युतीय ढोका र ढालहरू बन्द गर्नुपर्दछ, विशेष गरी नियन्त्रण बाकस र अपरेसन बक्स।
२) मेशिन उपकरण सफा गर्न एयर गन वा कम्प्रेस्ड हावा प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ (बेयरिंग वा स्लाइडवेमा भग्नावशेष र धूलो रोक्नको लागि)।
)) सुरक्षा कभरमा मेसिन उपकरणको पछाडि र पछाडि मर्मत र मर्मत कार्य अगाडि बढाउनु अघि अपरेशन प्यानेलमा पावर स्विच बन्द गर्न निश्चित गर्नुहोस्, र त्यसपछि पावर अफ गर्नुहोस्। एकै साथ, अरूले मेसिन खोल्नबाट रोक्न चेतावनी स hang्केतहरू राख्नुहोस्।
२.२ दैनिक मर्मतसम्भार
१) मेशिन उपकरण र फिक्स्चरको सबै खुला भागहरूमा चिप्स, धुलो र स्यान्ड्रीहरू हटाउनुहोस् र उपकरण एलाइनर वा अन्य सहायक उपकरणहरूमा चिप्स, धुलो र स्यान्ड्रीहरू हटाउनुहोस्।
२) स्पिन्डल बोर सफा गर्नुहोस्।
)) जाँच गर्नुहोस् कि चिकनशील तेल पम्पको तेल स्तरले नयाँ तेल थप्न आवश्यक छ कि र तेल दबाव तोकिएको दायरा (-5-k केजीएफ / सेमी २) भित्र छ वा छैन।
)) तीन-पोइन्ट संयोजन ट्या tank्कको तेल स्तर उचाइ जाँच गर्नुहोस् कि नयाँ तेल थप्न आवश्यक छ कि भनेर हेर्नका लागि।
)) फिल्टरको पानी तीन-पोइन्ट संयोजनमा पूर्ण रूपमा डिस्चार्ज भएको जाँच गर्नुहोस्।
)) जाँच गर्नुहोस् कि हावा सर्किटको हावाको चाप सामान्य छ (मान ≥ kg किलोग्राम / सेमी २)।
)) तेल सर्किट र संयुक्तमा तेल चुहावट छ कि छैन जाँच्नुहोस्, र उचित उपचार लिनुहोस्।
)) पत्रिकामा प्रत्येक ह्याण्डलको क्ल्याम्पि part्ग भाग सफा गर्नुहोस्।
)) जाँच गर्नुहोस् कि काट्ने फ्लुईड थप्न आवश्यक छ कि छैन र कूलि mechanism मेकानिजम सामान्य रूपमा चल्दछ कि भनेर जाँच गर्न मेसिन सुरु गर्नुहोस्।
१०) खुला खुला बिजुली भाग र सीमा स्विचहरू सफा गर्नुहोस्।
११) जाँच गर्नुहोस् कि सबै काम बत्तीहरू वा चेतावनी बत्तीहरू सामान्य छन्।
१२) मेसिन वरपरको वातावरण सफा र सुस्त राख्नुहोस्।
१)) अत्यधिक कार्बन जमावटका लागि ब्रेकर जाँच गर्नुहोस्।
२.3 साप्ताहिक मर्मत
१) दैनिक मर्मतसम्भार गर्नुहोस्
२) धुरीको टुप्पो र अन्य चलिरहेको भागहरू असामान्य आवाज र क्षतिको लागि जाँच गर्नुहोस्, र धुनुको वरिपरि सफा गर्नुहोस्।
)) जाँच गर्नुहोस् कि प्रत्येक अक्ष बहाव को मूल हो।
)) पानी ट्या tank्कको फिल्टर स्क्रिन सफा गर्नुहोस्, र शीतलक थप्नुहोस् जब यो अपर्याप्त हुन्छ।
)) तीन-पोइन्ट संयुक्त फिल्टर स्क्रिन सफा गर्नुहोस्।
)) स्पिन्डल समात्ने र लुजिning्ग कार्य सहज छ कि छैन भनेर पुष्टि गर्नुहोस्।
)) उपकरण परिवर्तन सहज छ कि छैन भनेर पुष्टि गर्नुहोस्।
)) लुब्रिकेशन पम्प सामान्य रूपमा काम गर्दछ वा गर्दैन जाँच गर्नुहोस् (-6--6 सीसी / समय / minutes मिनेट, तेल प्रेशर -5--5 केएफजी / सेमी २)।
२.4 मासिक मर्मत
१) साप्ताहिक मर्मतसम्भार गर्नुहोस्।
२) कन्ट्रोल बाकस, अपरेशन प्यानेल र हीट एक्सचेन्जरको फिल्टर स्क्रिनको भित्रबाट सफा गर्नुहोस्।
)) वर्कटेबलको स्तर जाँच गर्नुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि लंगर बोल्टहरू लक छन्।
)) जाँच गर्नुहोस् कि तीन-अक्ष गाइड पट्टी समायोजित गर्न आवश्यक छ कि।
)) सोलेनोइड वाल्भ र लिमिट स्विचको प्रकार्य जाँच गर्नुहोस्।
)) तीन-अक्ष गाइड रेलको ब्रश सफा गर्नुहोस् र आवश्यक भएमा अद्यावधिक गर्नुहोस्।
)) वायर कनेक्टर ढीला हुँदा कमजोर सम्पर्कको लागि जाँच गर्नुहोस्।
)) जाँच गर्नुहोस् कि तेल सर्किट अबाधित छ, र फिल्टर स्क्रिन जोइन्टमा सफा गर्नुहोस् जहाँ यो अब्स्ट्रक्ट्ट छैन।
)) जाँच गर्नुहोस् कि इन्टरलॉक उपकरण र टाइमर सामान्य छ कि छैन, ब्रेकरको उचित दाब छ कि छैन जाँच गर्नुहोस् र यसलाई सफा गर्नुहोस्।
१०) काटेको फ्लुइड निकाल्नुहोस्, पानी ट्या tank्की र पानी पाइप सफा गर्नुहोस्, र त्यसपछि काट्ने फ्लुइड स्थापना गर्नुहोस्।
११) पुष्टि गर्नुहोस् कि नेकां नियंत्रक सामान्य रूपमा संचालित हुन्छ।
१२) काउन्टरवेट चेन गियर शाफ्ट महिनामा एक पटक ग्रीस गर्नुहोस्।
२. half आधा वर्ष मर्मत
१) मासिक मर्मत पूरा गर्नुहोस्
२) NC इकाई, नियन्त्रण एकाइ, र मेशिन उपकरण सफा गर्नुहोस्।
)) तेल प्रेशर प्रणालीको लुब्रिकेटिंग तेल बदल्नुहोस्, ठाडो उपकरण पत्रिकाको गियरबक्स लुब्रिकेट गर्नुहोस् र भित्री गुहा सफा गर्नुहोस्।
)) तीन शाफ्टको पछाडि क्लीयरन्स जाँच गर्नुहोस् र यसलाई समायोजित गर्नुहोस्।
)) तीन-अक्ष ग्रिड राशि जाँच गर्नुहोस् र यसलाई समायोजित गर्नुहोस्।
२.6 वार्षिक मर्मत
१) सबै मोटर्स सफा गर्नुहोस्।
२) जाँच गर्नुहोस् कि अपरेसन प्यानलमा नियन्त्रण स्विचहरू संवेदनशील र सामान्य छन्।
)) जाँच गर्नुहोस् कि परिक्षण कार्यक्रम सुचारु रूपमा चल्दछ।
)) काउन्टरवेट चेन सामान्य प्रयोगमा छ कि छैन निर्धारण गर्नुहोस्।
)) विद्युतीय बक्समा सबै विच्छेदकर्ताहरूको सम्पर्कहरूमा कार्बन निक्षेप हटाउनुहोस् र यसलाई सफा गर्नुहोस्।
Parts भाग प्रतिस्थापन र मर्मत
1.१ निम्न कार्यहरू भाग प्रतिस्थापन गर्नु अघि गरिनु पर्दछ।
१) मेशिन नम्बर लेख्नुहोस्।
२) प्रतिस्थापन भागहरूको विनिर्देश र ब्रान्डको नोट बनाउनुहोस्।
)) भाग र अन्य सम्बन्धित भागहरू बीच स्थिति सम्बन्ध चिह्नित गर्नुहोस्, ताकि सजिलैसँग फेरि भेट्न सकिन्छ।
2.२ मर्मतका सावधानी
१) मर्मत गर्ने कर्मचारीहरूले बन्द बन्द चरणहरू बुझ्नुपर्दछ र बन्द पछि मर्मत कार्य पूरा गर्नुपर्दछ।
२) भित्री मर्मत गर्दा:
a पहिले शक्ति काट्नुहोस्;
b यदि मर्मत सम्भारका लागि पावर चलाउन आवश्यक छ भने, पहिले मेशीन लक गर्नुहोस् र त्यसपछि आन्तरिक प्रविष्ट गर्नुहोस्;
c चिपहरू हटाउनुहोस् जुन तिनीहरूलाई चिप्सले काट्नबाट रोक्नको लागि यस क्षेत्रलाई कुल्चन वा स्पर्श गर्न सक्दछ;
d स्लिपिंग तेल र चिप तरल हटाउनुहोस् जहाँ तपाईं चिप्लनबाट बच्नको लागि पैदल यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ।
)) नयाँ कम्पोनेन्ट प्रतिस्थापित भएपछि, पुरानो कम्पोनेन्टको सामान्य कार्यको पुष्टि गर्नु अघि यसलाई रद्द गर्न अनुमति दिँदैन।
3.3 मर्मत अधिकार र जिम्मेवारीहरू
१) मामिलाहरू अपरेटरहरूले आफैंले ह्यान्डल गर्न अनुमति दिए:
a स्क्रू र पाना धातु भागहरू जसले मेशिन उपकरणहरूको शुद्धतालाई असर गर्दछ।
b साधारण खरीद गरिएका भागहरू, जस्तै फ्यूज, स्विच, तेल सर्किट, पाइप संयुक्त, आदि।
२) व्यावसायिक योग्यता भएका व्यक्तिहरू निम्न मर्मत कार्यका लागि आवश्यक छन्:
a अत्यधिक टाढा रनआउट;
b स्पिन्डलको असामान्य आवाज छ;
c गाइड पेंच रखरखाव;
d तीन-अक्ष प्रसारण घटकहरूको मर्मतसम्भार (प्रसारण सिट, नट सीट, स्क्रू समर्थन र बेयरिंग, आदि)।
e उपकरण पत्रिका मर्मतसम्भार।
f चक्कु झार्ने र टकरावको ह्यान्डलिंग